“Ninyohow iska tag” – Laacib horay u soo maray Arsenal oo talo muhiim ah siiyay Arsene Wenger – Gool FM
“Ninyohow iska tag” – Laacib horay u soo maray Arsenal oo talo muhiim ah siiyay Arsene Wenger
Liibaan Fantastic February 27, 2018
(London) 27 Feb 2018 Xaalada tababare Arsene Wenger ee kooxda Arsenal ayaa maraysa meeshii ugu xumayd, waxaana jira warar sheegaya in maamulka kooxdu uu go’aansaday inuu iska diro dhamaadka xiliciyaareed kaan.
Halyeeygii hore ee Arsenal ee Ian Wright ayaa talo muhiim ah siiyay tababaraha kooxda ee Arsene Wenger maadama la joogo waqti aan laga dhagaysanayn cudur daar intaas ka badan.
Ian Wright ayaa kula taliyay Arsene Wenger inuu iska baneeyo kursiga Arsenal dhamaadka xiliciyaareed kaan kadib 21-sano oo uu soo maamulayay.
“Wenger ma awoodo inuu soo muujiyo cudur daar intaas ka badan, waxaana waajib ah inuu baxo waayo ma hubo inuu awoodo inuu hormarin karo kooxda, sidaas darteed waa waajib inuu baxo” ayuu yiri Ian Wright.
Taageerayaasha Arsenal ayaa soo muujiyay caradooda ku aadan hoos u dhaca ku yimid kooxda iyo go’aanada qalafsan ee mararka qaar kooxda u horseeda guul darada ee uu qaato tababare Wenger, waxayna dalbanayaan in laga diro kooxda.
Zidane oo ka jawaabay waraysi uu bixiyay weerar yahanka Chelsea ee Alvaro Morata
Ronaldo iyo Mohamed Salah oo maamuus loogu samaynayo Zurich (Maxay ku mutaysteen?)